नेपाली हाइब्रिड मकैले क्षेत्र विस्तार गर्दै
२०७७ भदौ, २४
भरतपुर । नेपालमा विकास गरिएको हाइब्रिड (वर्ण सङ्कर) मकैले क्षेत्र विस्तार गर्न थालेको छ । पछिल्लो पटक विकास भएको हाइब्रिड रामपुर–१० ले व्यावसायिक उत्पादन शुरू गरेपछि क्षेत्र विस्तार हुन थालेको हो ।
चितवनको रामपुरमा रहेको राष्ट्रिय मकैबाली अनुसन्धान कार्यक्रमले हाइब्रिड जातहरू विकास गरे पनि व्यावसायिक बीउ उत्पादन शुरू नहुँदा किसानसम्म पुग्न सकेको थिएन तर यस वर्षदेखि व्यावसायिक बीउ उत्पादनले क्षेत्र पनि विस्तारमा सहयोग पुर्‍याएको छ ।
यस वर्ष मात्रै नेपालमा ३० दशमलव ५ टन रामपुर–१० को हाइब्रिड बीउ उत्पादन भएको छ । राष्ट्रिय मकैबाली अनुसन्धान कार्यक्रमसँगको सहकार्यमा देशका विभिन्न सहकारी तथा कम्पनीहरूले बीउ उत्पादन गरेका हुन् । यस वर्ष नमूना खेती सहकारी महारानीझोडा झापाले चार टन, गोरखा सिड कम्पनी चितवनले ५ दशमलव ८ टन, लुम्बिनी सिड कम्पनी रूपन्देहीले १२ टन, युनिक सिड कम्पनी धनगढीले ३ टन र पञ्चशक्ति सिड कम्पनी कैलालीले १ टन हाइब्रिड बीउ उत्पादन गरेका छन् ।
अनुसन्धान कार्यक्रमले समेत तीन टन बीउ उत्पादन गरेको छ । ‘२–४ वर्ष अघिसम्म थोरै परिमाणमा मात्रै बीउ उत्पादन हुने गथ्र्यो’, राष्ट्रिय मकैबाली अनुसन्धान कार्यक्रमका संयोजक डा. केशवबाबु कोइरालाले भने, ‘गत वर्षदेखि उत्पादन वृद्धि हुँदै आएको छ ।’ गत वर्ष ५ टन बीउ उत्पादन भएकोमा यस वर्ष बढेर ३० दशमलव ५ टन पुगेको छ । आगामी वर्षहरूमा हाइब्रिड मकैको बीउ उत्पादन बढ्दै जाने कोइरालाले बताए ।
राष्ट्रिय मकैबाली अनुसन्धान कार्यक्रमले पहिलोपटक १७ वर्षअघि सन् २००३ मा नेपालमै ‘गौरव’ नामको मकैको हाइब्रिड जात विकास गरेको थियो तर त्यसको व्यावसायिक उत्पादन फस्टाउन सकेन । त्यसपछि पनि रामपुर हाइब्रिड–२, रामपुर–४, रामपुर–६ र रामपुर–८ तयार भए । ३ वर्षअघि सन् २०१७ मा तयार भएको रामपुर–१० भने किसानले रुचाएको पाइएपछि व्यावसायिक रूपमा बीउ उत्पादन शुरू भएको हो । समुद्री सतहदेखि ७०० मिटर उचाइसम्म हाइब्रिड रामपुर–१० मकैको खेती गर्न सकिन्छ । नेपालमै विकास भएकाले नेपाली हावापानी सुहाउँदो छ । यो उच्च तापक्रम पनि सहन सक्ने जात हो ।
सन् १९८५ देखि भारतसँग सीमा जोडिएका बारा पर्सा लगायतका जिल्लामा थोरै मात्रामा हाइब्रिड बीउ लगाउन थालिएको थियो । नेपालमा २०४५ सालदेखि हाइब्रिड बीउको अनुसन्धान शुरू भएको हो । ‘नेपालले विकास गरेको बीउमा किसानको आकर्षण छ’, कोइरालाले भने, ‘माग पुर्‍याउन सकिएको छैन ।’
स्थापनादेखि हालसम्म कार्यालयले मकैका ३६ जात सिफारिस गरेको छ । तीमध्ये हाइब्रिड ७ ओटा र सामान्य जात २९ ओटा छन् । यस्तै ७ ओटा जातलाई सूचीबाटै हटाइएको छ । मकालु–२, जानकी मकै, सर्लाही सेतो, हेटौंडा कम्पोजिट, ककनी पहेंलो, रामपुर पहेंलो र रामपुर–१ सूचीबाट हटाइएको हो । यी जातका मकै चलनचल्तीमा छैनन् । धेरै वर्षसम्म एउटै जातको मकै लगाउँदा उत्पादनमा कमी आउने भएपछि किसान नयाँ जातमा आकर्षित हुने गरेका छन् ।
अनुसन्धान केन्द्रको ८५ हेक्टर क्षेत्रफल र देशका विभिन्न जिल्लामा मकैको बीउ अनुसन्धान र विकासका काम भइरहेका छन् । मकै नेपालको मुख्य बालीभित्र पर्दछ । नेपालमा मकैखेती हुने कुल ९ लाख ४० हजार हेक्टरमध्ये १५ प्रतिशतमा हाइब्रिड लाग्छ । हाइब्रिड मकैको बीउ देशभित्र उत्पादन गर्न नसक्दा वर्षेनि करोडौं मूल्यको बीउ आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन हाइब्रिडमा जानुको विकल्प नभएको कृषि वैज्ञानिकले बताउँदै आएका छन् । रासस
उत्पादन तथा रोजगारका लागि प्रदेश सरकारले सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने[२०७७ असोज, ८]
चितवनमा महिलाको नाममा जग्गा पास गर्नेको संख्या बढ्दै [२०७७ असोज, ८]
खानेपानी आयोजनाका पाइप हस्तान्तरण[२०७७ असोज, ८]
यातायात कार्यालय चितवनको राजस्व भदौमा एकतिहाईले घट्यो [२०७७ असोज, ७]
झण्डै ९ महीनापछि चल्न थाले सौराहामा पर्यटक बस[२०७७ असोज, ७]
पदक प्रशस्ति !
स्वदेशी मोडलको नमूना चिलिमे जलविद्युत् आयोजना
सरकारी अनुगमनपछि ओरालो लाग्दै प्याजको मूल्य
बैंकमा तरलता थुप्रियो
तङ्ग्रिँदै उद्यम व्यवसाय : लय नसमात्दै नियन्त्रणको चिन्ता